Vasculitis iqembu yizifo ezihlobene nokungabikho ukuvuvukala nokubhujiswa imithambo yegazi. Lesi sihloko sinikeza izimpendulo zemibuzo ephathelene lokho izimpawu zesifo, yini imbangela yesifo, iziphi izindlela ngokwelashwa nokuvimbela.
Vasculitis, isithombe ongawabona ngezansi, akubhekwa isifo, kodwa kunalokho a syndrome, okwenzeka izifo athile ezicutshini, isibonelo, omzimba izicubu erythematosus, i-rheumatoid arthritis. Ngokuvamile kwenzeka todvwa, futhi izimpawu vasculitis ahambisana ezicutshini.
Ukuvuvukala simo singenzeka kunoma yimuphi umkhumbi igazi. Lapho erythema nodosum, periarteritis nodosa, giant cell arteritis, arteritis Takayasu sika, Henoch-Schönlein syndrome vasculitis libhekene ezinqunyelwe - kuthinta kuphela imithambo yegazi ezinkulu, arteriole futhi kuma-capillary, noma iyiphi abathandekayo ezithile, njengabaphostoli nemilenze noma ikhanda.
Izimpawu vasculitis azicacile. izitsha Eshiswa kungase kuhambisane imfiva, ubuthakathaka jikelele, kwehle esesuthi futhi isisindo somzimba, ukuqubuka kwesikhumba, ukopha, ukuqaqamba kwamalunga omzimba, ukuvuvukala, lakhulisiwe zamanzi. Phakathi vasculitis zingase zifane izifo, izifo sokuhlasela kwamasosha omzimba, ukuthuthukiswa isimila, neuritis, ngezinye izikhathi yenza kube nzima ukuhlonza. Ukuze siqonde ukuthi kungenzeka izimpawu isifo vasculitis, isithombe esithathwe ngezisetshenziswa ezikhethekile, ubonisa kubo.
Ezimweni eziningi, imbangela isifo akukwazi ukusungulwa, kuphela kwezinye izimo indima ekuthuthukisweni yayo eyadlalwa amagciwane kwesibindi. Kukhona izinguqulo ezahlukahlukene izimbangela zesifo. Ngokusho komunye wabo eba yisishiso e imithambo yegazi ngenxa misperception kwesimiso somzimba sokuzivikela ezifweni, izicubu imithambo yegazi njengoba into angaphandle kanye ibhece. Amaseli kwesimiso somzimba sokuzivikela ezifweni icuphe ukuvuvukala ezizungezile isitsha futhi ukungena ngaphakathi kwezindonga zabo, ngaleyo ndlela kwezicubu elimazayo futhi wabhubhisa eziyishumi nemitshingo ukuthi kuhlinzekwa ngu lezi zitsha. iziyaluyalu kwegazi kwezitho nezinzwa kwenzeka noma ngenxa occlusion semithambo, noma ngenxa permeability ngokweqile izindonga zawo. Ezinganele liningi igazi kuholela ekwakhekeni izilonda ischemic kwezitho, okungaveza umonakalo izicubu engelapheki.
Vasculitis ingaqala ngokuzimela (vasculitis okuyinhloko) uvuke ezifweni ezinjenge meningitis, sepsis, psoriasis nokunye. (Vasculitis Secondary). Baningi syndromes, njalo ephelezelwa ukuvuvukala imithambo bonke osayizi. Ngayinye endaweni ethintekile, ngaphezu, inezimpawu ayo vasculitis. Lezi zinto ziyizenzakalo inqubo nzima ukuxilongwa izifo letindzala yalolu hlobo. Ngakho-ke, uphethwe Kumiswa izikhungo ezikhethekile ngesisekelo imiphumela amasu eziningi ucwaningo: wezinsimbi, immunological, amakhemikhali. Phakathi kwabo, ukuhlaziya ephelele umchamo, Angiography (semithambo imaging), ama-X ray, tomography, biopsy kwezicubu ezilimele.
Kukhethwa izindlela ukwelashwa vasculitis incike uphethwe kanye izimbangela zesifo. Ezimweni eziningi, linqume ukusetshenziswa anticoagulants, antihistamine, corticosteroids, Vitamin amalungiselelo, ama-ejenti immunosuppressive, ulwelwesi, cytostatics. Kunoma yikuphi, uma ubona ngaso izimpawu vasculitis, kufanele ngokushesha kudokotela.